Usoro ojiji - ExoSpecial
Weebụsaịtị ExoSpecial.com bụ ọrụ nwebiisinka nke ExoSpecial. Ụfọdụ atụmatụ nke saịtị ahụ nwere ike ịdabere na ntuziaka, usoro, ma ọ bụ iwu, nke a ga-etinye na saịtị ahụ n'ihe gbasara njirimara ndị a.
Usoro ojiji ndị a kọwara usoro na ọnọdụ iwu kwadoro nke na-ahụ maka ojiji gị na saịtị ahụ. Site n'ịnweta saịtị ahụ, ị ​​na-agbaso iwu ndị a ma ị na-anọchite anya na ị nwere ikike na ikike ịbanye na Usoro ndị a. Ị ga-adị ma ọ dịkarịa ala afọ 18 iji nweta saịtị ahụ. Ọ BỤRỤ na ị kwenyeghị na nke ọ bụla n'ime usoro ndị a, ejila saịtị ahụ.
Ịnweta saịtị ahụ
N'okpuru Usoro ndị a. ExoSpecial na-enye gị ikike enweghị ike ibufe, enweghị naanị ya, nke nwere ike ịweghachi ya, ikike ị nweta saịtị maka naanị maka nkeonwe gị, iji na-abụghị nke azụmahịa yana machibido ụdị nbipu data ọ bụla.
Restfọdụ Mmachibido. Ikike akwadoro gị na Usoro ndị a bụ n'okpuru mmachi ndị a: (a) ị gaghị ere, ịgbazinye ego, mgbazinye, nyefe, kenye, kesaa, nnabata, ma ọ bụ na-erepịa saịtị ahụ n'ụzọ azụmahịa; (b) ị gaghị agbanwe, rụọ ọrụ mmepụta nke, kewaa, tụgharịa ma ọ bụ megharịa engineer akụkụ ọ bụla nke saịtị ahụ; (c) ịgaghị enweta saịtị ahụ iji wuo weebụsaịtị yiri ya ma ọ bụ asọmpi; na (d) belụsọ dị ka ekwuru n'ụzọ doro anya na ebe a, ọ nweghị akụkụ nke saịtị ahụ enwere ike depụtaghachi, megharịa, kesaa, bipụtaghachi, budata, gosipụta, biputere ma ọ bụ bufee n'ụdị ọ bụla ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla ọ gwụla ma egosighi ụzọ ọzọ, mwepụta, melite ma ọ bụ n'ọdịnihu. mgbakwunye ọzọ na arụmọrụ nke saịtị ahụ ga-adị n'okpuru usoro ndị a. Ikike nwebiisinka na ọkwa ndị ọzọ dị na saịtị ahụ ga-edoberịrị na mbipụta ya niile.
Ụlọ ọrụ nwere ikike ịgbanwe, kwụsịtụ, ma ọ bụ kwụsị saịtị ahụ ma ọ bụ na-enweghị ọkwa nye gị. Ị kwadoro na Ụlọ ọrụ agaghị ejide gị ma ọ bụ ndị ọzọ ọ bụla maka mgbanwe ọ bụla, nkwụsị, ma ọ bụ nkwụsị nke saịtị ma ọ bụ akụkụ ọ bụla.
Enweghị nkwado ma ọ bụ mmezi. Ị kwenyere na Ụlọ ọrụ agaghị enwe ọrụ ịnye gị nkwado ọ bụla n'ihe metụtara saịtị ahụ.
Ewezuga ọdịnaya onye ọrụ ọ bụla ị nwere ike ịnye, ị maara na ikike ikike ọgụgụ isi, gụnyere nwebisiinka, patent, ụghalaahịa, na nzuzo azụmaahịa, na saịtị na ọdịnaya ya bụ nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-ebubata ya. Rịba ama na Usoro ndị a na ịnweta saịtị ahụ anaghị enye gị ikike ọ bụla, aha ma ọ bụ mmasị na ma ọ bụ ikike ikike ọgụgụ isi ọ bụla, belụsọ oke ikike ohere egosipụtara na nkwekọrịta a. Ụlọ ọrụ na ndị na-ebubata ya na-edobe ikike niile enyeghị na Usoro ndị a.
Njikọ ndị ọzọ & Mgbasa ozi; Ndị ọrụ ndị ọzọ
Njikọ ndị ọzọ na mgbasa ozi. Saịtị ahụ nwere ike ịnwe njikọ nke weebụsaịtị na ọrụ ndị ọzọ, yana/ma ọ bụ gosipụta mgbasa ozi maka ndị ọzọ. Njikọ ndị ọzọ na mgbasa ozi ndị dị otú ahụ anọghị n'okpuru njikwa ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ anaghịkwa ahụ maka njikọ na mgbasa ozi nke ndị ọzọ. Ụlọ ọrụ na-enye ohere ịnweta Njikọ na Mgbasa Ozi Ndị Ọzọ a naanị ka ọ dị gị mma, ọ dịghị enyocha, kwado, nyochaa, kwadoro, akwụkwọ ikike, ma ọ bụ mee ihe nnọchiteanya ọ bụla gbasara njikọ na mgbasa ozi nke atọ. Iji njikọ na mgbasa ozi ndị ọzọ niile n'ihe egwu nke gị, ma kwesịrị itinye oke ịkpachara anya na ezi uche kwesịrị ekwesị n'ime ya. Mgbe ị pịrị na njikọ ndị ọzọ na mgbasa ozi nke atọ, usoro na atumatu nke ndị ọzọ dị na-emetụta, gụnyere omume nzuzo nke ndị ọzọ na nchịkọta data.
Ndị ọrụ ndị ọzọ. Onye ọrụ saịtị ọ bụla na-ahụ maka naanị ọdịnaya nke onye ọrụ ọ bụla. N'ihi na anyị anaghị ejikwa ọdịnaya onye ọrụ, ị kwenyere ma kwenye na ọ bụghị anyị na-ahụ maka ọdịnaya onye ọrụ ọ bụla, ma ọ bụ nke gị ma ọ bụ ndị ọzọ nyere ya. Ị kwenyere na Ụlọ ọrụ agaghị abụ maka mfu ma ọ bụ mmebi ọ bụla kpatara n'ihi mmekọrịta ọ bụla.
Ị na-ahapụ ugbu a ma hapụ ụlọ ọrụ ahụ ruo mgbe ebighị ebi na ndị ọrụ anyị, ndị ọrụ, ndị ọrụ, ndị nnọchiteanya, ndị nọchiri anya, ma kenye site na, ma si otú a na-ahapụ ma hapụ, esemokwu ọ bụla gara aga, ugbu a na n'ọdịnihu, nkwupụta, esemokwu, ọchịchọ, ikike, ọrụ, ụgwọ. omume na ihe kpatara omume nke ụdị na ọdịdị ọ bụla, nke bilitere ma ọ bụ bilitere ozugbo ma ọ bụ na-apụtaghị ìhè site na, ma ọ bụ nke metụtara saịtị ahụ ozugbo ma ọ bụ na-apụtaghị ìhè. Ọ bụrụ na ị bụ onye bi na California, ị ga-ewepụ ngalaba iwu obodo California 1542 n'ihe e kwuru n'elu, nke na-ekwu, sị: "Ntọhapụ n'ozuzu adịghị agbatị na nkwupụta nke onye na-akwụ ụgwọ na-amaghị ma ọ bụ chee na ọ dị na ihu ọma ya na ụlọ ọrụ ahụ. oge imezu ntọhapụ ahụ, nke ọ bụrụ na ọ mara ya ga-abụrịrị na ọ metụtawo nkwekọrịta ya na onye ji ụgwọ."
Kuki na mgbama webụ. Dịka weebụsaịtị ọ bụla ọzọ, ExoSpecial na-eji 'kuki'. A na-eji kuki ndị a iji chekwaa ozi gụnyere mmasị ndị ọbịa, yana ibe ndị dị na webụsaịtị onye ọbịa nwetara ma ọ bụ gara. A na-eji ozi a iji kwalite ahụmịhe nke ndị ọrụ site na ịhazi ọdịnaya ibe weebụ anyị dabere na ụdị ihe nchọgharị ndị ọbịa na/ma ọ bụ ozi ndị ọzọ.
A na-enye saịtị ahụ na ntọala "dị ka ọ dị" yana "dị ka ọ dị", ụlọ ọrụ na ndị na-ebubata anyị na-ekwupụta n'ụzọ doro anya akwụkwọ ikike ọ bụla na ọnọdụ nke ụdị ọ bụla, ma ọ bụ nke egosipụtara, nke pụtara ìhè, ma ọ bụ nke iwu kwadoro, gụnyere akwụkwọ ikike ma ọ bụ ọnọdụ nke ịzụ ahịa. , mma maka otu ebumnuche, aha, ọ joyụ dị jụụ, izi ezi, ma ọ bụ enweghị mmebi. Anyị na ndị na-ebubata anyị anaghị ekwe nkwa na saịtị ahụ ga-emezu ihe ị chọrọ, ọ ga-adị na akwụsịghị akwụsị, n'oge, nchekwa, ma ọ bụ enweghị njehie, ma ọ bụ bụrụ eziokwu, ntụkwasị obi, enweghị nje ma ọ bụ koodu ndị ọzọ na-emerụ ahụ, zuru oke, nke iwu kwadoro. , ma ọ bụ nchekwa. Ọ bụrụ na ọdabara iwu chọrọ akwụkwọ ikike ọ bụla gbasara saịtị ahụ, ikike niile dị otu a nwere oke n'ime ụbọchị iri itoolu (90) site na ụbọchị ojiji mbụ.
Ụfọdụ ikike anaghị ekwe ka mwepu nke akwụkwọ ikike pụtara, ya mere mwepu a dị n'elu nwere ike ọ gaghị emetụta gị. Ụfọdụ ikike anaghị ekwe ka mmachi ogologo oge akwụkwọ ikike egosipụtara na-adị, yabụ mmachi dị n'elu nwere ike ọ gaghị emetụta gị.
Mmachi na ibu
Ruo n'ókè iwu kwadoro, na ọ dịghị ihe ọ bụla ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị na-ebubata anyị ga-adabara gị ma ọ bụ ndị ọzọ ọ bụla maka uru ọ bụla furu efu, data furu efu, ụgwọ nke ịzụrụ ngwaahịa dochie anya, ma ọ bụ ihe ọ bụla na-apụtaghị ìhè, nke ga-esi na ya pụta, ihe nṅomi, mberede, mmebi pụrụ iche ma ọ bụ ntaramahụhụ sitere na ma ọ bụ metụtara usoro ndị a ma ọ bụ ojiji gị, ma ọ bụ enweghị ike iji saịtị ahụ ọbụlagodi ma ọ bụrụ na a dụrụ ụlọ ọrụ ọdụ maka ohere nke mmebi ahụ. Ịnweta na iji saịtị ahụ bụ n'aka gị na ihe ize ndụ, na ị ga-abụ naanị maka mmebi ngwaọrụ gị ma ọ bụ sistemụ kọmputa, ma ọ bụ mfu data sitere na ya.
Ruo n'ókè iwu kwadoro, n'agbanyeghị ihe ọ bụla megidere nke dị n'ime ebe a, ụgwọ anyị nyere gị maka mmebi ọ bụla sitere na ma ọ bụ metụtara nkwekọrịta a, ga-ejedebe mgbe niile na ihe karịrị dollar US iri ise (anyị $50). Ịdị adị nke ihe karịrị otu nkwupụta agaghị eme ka oke a gbasaa. Ị kwenyere na ndị na-ebubata anyị agaghị enwe ụgwọ ọ bụla n'ụdị ọ bụla sitere na ma ọ bụ metụtara nkwekọrịta a.
Ụfọdụ ikike anaghị ekwe ka mmachi ma ọ bụ mwepu nke ụgwọ maka mmebi mberede ma ọ bụ na-akpata, yabụ mmachi ma ọ bụ mwepu a dị n'elu nwere ike ọ gaghị emetụta gị.
Oge na nkwụsị. N'okpuru ngalaba a, Usoro ndị a ga-anọgide na-arụ ọrụ zuru oke mgbe ị na-eji saịtị ahụ. Anyị nwere ike kwụsịtụ ma ọ bụ kwụsịchaa ikike gị iji saịtị ahụ n'oge ọ bụla n'ihi ihe ọ bụla n'uche anyị, gụnyere maka iji saịtị ọ bụla mebiri Usoro ndị a. Mgbe a kwụsịrị ikike gị n'okpuru Usoro ndị a, Akaụntụ gị na ikike ịnweta na iji saịtị ahụ ga-akwụsị ozugbo. Ị ghọtara na nkwụsị ọ bụla nke Akaụntụ gị nwere ike ịgụnye ihichapụ ọdịnaya nke onye ọrụ gị na akaụntụ gị na ọdụ data dị ndụ. Ụlọ ọrụ agaghị enwe ụgwọ ọ bụla nye gị maka nkwụsị ọ bụla nke ikike gị n'okpuru Usoro ndị a.
Ụlọ ọrụ na-akwanyere ikike ọgụgụ isi nke ndị ọzọ ùgwù ma rịọ ka ndị ọrụ nke saịtị anyị mee otu ihe ahụ. N'ihe metụtara saịtị anyị, anyị anabatala ma mejuputa amụma gbasara iwu nwebiisinka nke na-enye maka iwepụ ihe ọ bụla na-emebi iwu yana maka nkwụsị nke ndị ọrụ nke saịtị anyị dị n'ịntanetị bụ ndị na-emebi ikike ikike ọgụgụ isi ugboro ugboro, gụnyere nwebisiinka. Ọ bụrụ na ị kwenyere na otu n'ime ndị ọrụ anyị bụ, site na iji saịtị anyị, na-emebi ikike nwebisiinka n'ụzọ iwu na-akwadoghị n'ọrụ, ma chọọ ka ewepụ ihe ahụ ebubo ebubo, ozi ndị a n'ụdị ngosi ederede (dị ka ọ dị. ruo 17 USC § 512(c)) ga-enyerịrị:
mbinye aka nke anụ ahụ ma ọ bụ eletrọnịkị;
njirimara nke ọrụ nwebiisinka nke ị na-ekwu na e mebiri ya;
njirimara nke ihe dị na ọrụ anyị nke ị na-ekwu na ọ na-emebi iwu na ị rịọ ka anyị wepụ;
ozi zuru oke iji kwe ka anyị chọta ihe dị otú ahụ;
adreesị gị, nọmba ekwentị, na adreesị ozi-e;
nkwupụta na ị nwere ezi okwukwe nkwenye na enyeghị ikike iji ihe ndị na-adịghị mma; na
nkwupụta na ozi dị na ọkwa ahụ ziri ezi, yana n'okpuru ntaramahụhụ nke ịgba akaebe ụgha, na ị bụ onye nwe nwebiisinka e boro ebubo imebi ma ọ bụ na enyere gị ikike ime ihe n'aha onye nwe nwebisiinka.
Biko mara na, dị ka 17 USC § 512(f), nkọwahie ọ bụla nke eziokwu ihe dị na ọkwa ederede na-edobe ndị na-eme mkpesa na-akwụ ụgwọ maka mmebi ọ bụla, ụgwọ na ụgwọ onye ọka iwu wetara anyị n'ihe metụtara ọkwa ederede na ebubo nke. Mmebi nwebiisinka.
Usoro ndị a na-edobe ngbanwe oge ụfọdụ, ma ọ bụrụ na anyị emee mgbanwe ọ bụla, anyị nwere ike ịgwa gị site na iziga gị ozi-e na adreesị ozi-e ikpeazụ ị nyere anyị yana / ma ọ bụ site na ikesa ọkwa mgbanwe na anyị. Saịtị. Ọ bụ gị na-ahụ maka ịnye anyị adreesị ozi-e gị kacha ugbu a. Ọ bụrụ na adreesị ozi-e ikpeazụ ị nyere anyị abaghị uru izipu anyị nke e-mail nwere ọkwa dị otú ahụ ga-abụ ọkwa dị irè nke mgbanwe ndị akọwara na ọkwa ahụ. Mgbanwe ọ bụla na Usoro ndị a ga-adị irè n'isi ụbọchị iri atọ (30) kalịnda na-esochi ezigara gị ozi e-mail ma ọ bụ ụbọchị iri atọ (30) kalịnda na-esote ibipụta ọkwa mgbanwe na saịtị anyị. Mgbanwe ndị a ga-adị irè ozugbo maka ndị ọrụ ọhụrụ nke saịtị anyị. Ịga n'ihu na-eji saịtị anyị na-eso ọkwa mgbanwe ndị dị otú ahụ ga-egosi nkwenye gị maka mgbanwe ndị dị otú ahụ na nkwekọrịta ga-ejikọta ya na usoro na ọnọdụ nke mgbanwe ndị dị otú ahụ.
Biko gụọ Agreement Arbitration nke ọma nke ọma. Ọ bụ akụkụ nke nkwekọrịta gị na Ụlọ ọrụ ma na-emetụta ikike gị. O nwere usoro maka mkpebi iwu ejidere iwu na ịwepụ ihe omume klaasị.
Ntinye nke nkwekọrịta nkwekọrịta. Nkwuputa na esemokwu niile metụtara Usoro ma ọ bụ iji ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla nke ụlọ ọrụ nyere na-enweghị ike idozi ya n'ụzọ nkịtị ma ọ bụ na obere ụlọ ikpe na-ekwu ka a ga-edozi site na njide mkpezi n'otu n'otu n'okpuru usoro nke Agreement Arbitration. Ọ gwụla ma ekwenyeghị na ya, usoro ikpe ikpe niile ga-eme n'asụsụ Bekee. Nkwekọrịta mkpebi a na-emetụta gị na ụlọ ọrụ ahụ, yana ndị enyemaka ọ bụla, ndị mmekọ, ndị nnọchi anya, ndị ọrụ, ndị bu ya ụzọ na mmasị, ndị ga-anọchi anya, na ndị na-ekenye ọrụ, yana ndị ọrụ niile nyere ikike ma ọ bụ enweghị ikike ma ọ bụ ndị erite uru na ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa enyere n'okpuru Usoro.
Achọrọ ọkwa na mkpebi esemokwu na-ezighi ezi. Tupu otu ọ bụla enwee ike ịchọ mkpezi, ndị otu ahụ ga-ebu ụzọ ziga ndị nke ọzọ akwụkwọ mkpesa nke esemokwu na-akọwa ọdịdị na ndabere nke nkwupụta ma ọ bụ esemokwu, yana enyemaka a rịọrọ. Ekwesịrị iziga ọkwa ụlọ ọrụ legal@exospecial.com. Mgbe ịnatachara ọkwa ahụ, gị na ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịnwa idozi nkwupụta a ma ọ bụ esemokwu na-anọghị n'usoro. Ọ bụrụ na gị na Ụlọ ọrụ ahụ edozighị nkwupụta ma ọ bụ esemokwu n'ime ụbọchị iri atọ (30) ka enwetara ọkwa ahụ, ndị otu ọ bụla nwere ike ịmalite ikpe mkpezi. Agaghị egosi onye mkpezi ego nke mkpezi ọ bụla nyere ndị otu ọ bụla ruo mgbe onye mkpezi kpebichara ego nrite nke otu ọ bụla nwere ikike.
Iwu mkpezi ikpe. A ga-ebido mkpezi ikpe site n'aka American Arbitration Association, onye na-eweta mkpebi esemokwu ọzọ guzosiri ike nke na-enye mkpezi dịka akọpụtara na ngalaba a. Ọ bụrụ na AAA adịghị maka mkpezi, ndị otu ga-ekwenye ịhọrọ onye na-eweta ADR ọzọ. Iwu nke onye na-enye ADR ga-achịkwa akụkụ niile nke mkpezi belụsọ ruo n'ókè iwu ndị ahụ megidere Usoro ahụ. Iwu mkpezi ikpe ndị ahịa AAA na-achịkwa mkpezi dị na ntanetị na ADR.org ma ọ bụ site na ịkpọ AAA na 1-800-778-7879. Otu onye na-ekpe ikpe na-anọpụ iche ga-eduzi mkpezi a. Enwere ike dozie nkwupụta ma ọ bụ esemokwu ọ bụla ebe ngụkọta ego nke ihe nrite a na-achọ na-erughị puku dollar iri (US $10,000.00) site na njide mkpezi na-adabereghị na ọdịdị, na nhọrọ nke ndị otu na-achọ enyemaka. Maka nkwuputa ma ọ bụ esemokwu ebe ngụkọta ego nke ihe nrite a na-achọ bụ puku dollar iri (US $10,000.00) ma ọ bụ karịa, a ga-ekpebi ikike ịnụrụ ihe site na Iwu Arbitration. A ga-ekpe ikpe ọ bụla n'ebe dị 100 kilomita site na ebe obibi gị, ọ gwụla ma ịnọ na mpụga United States, ma ọ gwụla ma ndị otu ahụ kwenyere n'ụzọ ọzọ. Ọ bụrụ na ịnọ na mpụga US, onye na-ekpe ikpe ga-enye ndị otu ahụ ọkwa ezi uche dị na ya maka ụbọchị, oge na ebe a ga-anụ okwu ọnụ ọ bụla. Enwere ike itinye ikpe ọ bụla na nturu ugo nke onye na-ekpe ikpe nyere n'ụlọ ikpe ọ bụla nwere ikike. Ọ bụrụ na onye na-ekpe ikpe nyere gị onyinye nke karịrị onyinye ikpeazụ nke ụlọ ọrụ ahụ nyere gị tupu mmalite nke mkpezi ikpe, ụlọ ọrụ ahụ ga-akwụ gị ụgwọ nke ukwuu ma ọ bụ $ 2,500.00. Ndị otu ọ bụla ga-ebu ụgwọ nke aka ya na nkwụghachi ụgwọ sitere na mkpezi ikpe ahụ ma kwụọ ụgwọ nhata nke ụgwọ na ụgwọ nke onye na-enye ADR.
Iwu ndị ọzọ maka mkpezi dabere na-abụghị nke mpụta. Ọ bụrụ na ahọpụtara mkpezi na-esiteghị n'ọdịdị, a ga-eme mkpebi ikpe site na ekwentị, n'ịntanetị na/ma ọ bụ dabere naanị na ntinye ederede; otu a kapịrị ọnụ ga-ahọrọ ndị na-amalite mkpezi ikpe ahụ. Mkpesa ahụ agaghị agụnye ọdịdị onwe onye ọ bụla site n'aka ndị otu ma ọ bụ ndị akaebe ọ gwụla ma ndị otu ahụ kwenyere n'ụzọ ọzọ.
Oke oge. Ọ bụrụ na gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ ahụ na-agbaso mkpezi ikpe, a ga-ebido na/ma ọ bụ rịọ ya n'ime iwu nke oke yana n'ime oge ngwụcha ọ bụla etinyere n'okpuru Iwu AAA maka nkwupụta ahụ dị mkpa.
Onye Nchịkwa nke Onye Nchịkwa. Ọ bụrụ na ebido mkpezi ikpe, onye na-ekpe ikpe ga-ekpebi ikike na ụgwọ nke gị na ụlọ ọrụ ahụ, a gaghị ejikọta esemokwu ahụ na ihe ọ bụla ọzọ ma ọ bụ sonye na ikpe ma ọ bụ ndị ọzọ. Onye na-ekpe ikpe ga-enwe ikike inye mkpesa na-emebi ihe niile ma ọ bụ akụkụ nke nkwupụta ọ bụla. Onye na-ekpe ikpe ga-enwe ikike ịnye mmebi ego, yana inye ọgwụgwọ ọ bụla na-abụghị nke ego ma ọ bụ enyemaka dị onye ọ bụla n'okpuru iwu ọdabara, Iwu AAA, na Usoro. Onye na-ekpe ikpe ga-enye ihe nrite ederede na nkwupụta nke mkpebi na-akọwa ihe nchoputa na nkwubi okwu dị mkpa nke ihe nrite ahụ dabere na ya. Onye na-ekpe ikpe nwere otu ikike inye enyemaka n'otu n'otu nke onye ọka ikpe n'ụlọ ikpe ga-enwe. Ihe nrite nke onye mkpezi ikpe bụ nke ikpeazụ ma dabere gị na ụlọ ọrụ ahụ.
Waiver nke ikpe Jury. Ndị otu a na-ewepụ ikike ha gbasara iwu na iwu ka ha gaa n'ụlọ ikpe wee nwee ọnwụnwa n'ihu onye ọka ikpe ma ọ bụ ndị juri, kama na-ahọpụta na ebubo niile na esemokwu niile ga-edozi site na mkpezi n'okpuru Nkwekọrịta Mkpebi a. Usoro mkpezi ikpe na-adịkarị ntakịrị, dị irè ma dịkwa ọnụ ala karịa iwu dị n'ụlọ ikpe ma na-anọkwa n'okpuru nyocha nke ụlọikpe nwere oke. Ọ bụrụ na ịgba akwụkwọ ọ bụla ga-ebilite n'etiti gị na ụlọ ọrụ ahụ n'ụlọ ikpe steeti ọ bụla ma ọ bụ gọọmentị etiti na-ekpe ikpe ịhapụ ma ọ bụ mee ka ikike mkpezi ikpe ma ọ bụ nke ọzọ, gị na ụlọ ọrụ ahụ napụrụ ikike niile maka ikpe ikpe ikpe, kama ịhọrọ na a ga-edozi esemokwu ahụ. site n'aka onye ikpe.
Nkwụsị nke klaasị ma ọ bụ omume agbakwunyere. Okwu niile na esemokwu dị n'ime oke nkwekọrịta mkpezi a ga-abụrịrị ikpe ma ọ bụ kpee ikpe n'otu n'otu ọ bụghị na klaasị, na nkwupụta nke ihe karịrị otu onye ahịa ma ọ bụ onye ọrụ enweghị ike ikpe ma ọ bụ gbaa akwụkwọ n'otu ma ọ bụ jikọta ya na nke ndị ahịa ọ bụla ọzọ. ma ọ bụ onye ọrụ.
Nkwenye. Akụkụ niile nke usoro mkpezi ikpe ga-abụ nke nzuzo. Ndị otu ahụ kwenyere idobe nzuzo ọ gwụla ma iwu chọrọ ọzọ. Paragraf a agaghị egbochi ndị otu ịdeba n'ụlọ ikpe ozi ozi ọ bụla dị mkpa iji kwado Nkwekọrịta a, iji mejupụta onyinye mkpezi ikpe, ma ọ bụ ịchọ enyemaka ma ọ bụ enyemaka ziri ezi.
Ndozi. Ọ bụrụ na achọpụtara akụkụ ọ bụla ma ọ bụ akụkụ nke Nkwekọrịta Mkpebi a n'okpuru iwu na-abaghị uru ma ọ bụ enweghị ike ime ya site na ụlọ ikpe nwere ikike, mgbe ahụ akụkụ ma ọ bụ akụkụ dị otú ahụ a kapịrị ọnụ agaghị enwe ike na mmetụta ma a ga-ebipụ ya na ihe fọdụrụ n'ime nkwekọrịta ahụ ga-adị. na-aga n'ihu na ike zuru oke na mmetụta.
Ikike ịhapụ. Ikike ọ bụla ma ọ bụ niile nke akwadoro na Nkwekọrịta Mkpebi a nwere ike ịwepụ ndị otu onye ebubo ebubo ahụ megide ya. Mwepụ dị otú ahụ agaghị ahapụ ma ọ bụ metụta akụkụ ọ bụla ọzọ nke Agreement Arbitration a.
Vlanahụ Agreement. Nkwekọrịta mkpezi ikpe a ga-alanarị nkwụsị nke mmekọrịta gị na Ụlọ ọrụ.
Clalọikpe Obere Agbanyeghị, ihe ndị a e kwuru n'elu, ma gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ike iweta ihe mmadụ mere n'obere ụlọ ikpe nkwuputa.
Enyemaka Kwesịrị Ekwesị Mberede. Ka o sina dị, ihe ndị a e kwuru n'elu, ndị otu ọ bụla nwere ike ịchọ enyemaka kwesịrị ekwesị ozugbo n'ihu ụlọ ikpe steeti ma ọ bụ gọọmenti etiti iji kwado ọnọdụ dị ugbu a na-echere mkpezi. Agaghị ewere arịrịọ maka usoro nwa oge ka ịwepụ ikike ma ọ bụ ọrụ ọ bụla n'okpuru Agreement Arbitration a.
Ekwughị N'okpuru Arbitration. N'agbanyeghị nke a e kwuru n'elu, nkwutọ nke nkwutọ, imebi iwu Kọmputa wayo na mmegbu, na mmebi ma ọ bụ imebi patent nke onye ọzọ, nwebisiinka, ụghalaahịa ma ọ bụ nzuzo nzuzo agaghị etinye aka na Nkwekọrịta Mkpebi a. N'ọnọdụ ọ bụla ebe Agreement Arbitration nke a kwuru na-enye ndị otu ahụ ohere ịgba akwụkwọ n'ụlọ ikpe, ndị otu a na-ekwenye na ha ga-edo onwe ha n'okpuru ikike nke ụlọ ikpe dị na steeti Louisiana, maka ebumnuche ndị ahụ.
Saịtị ahụ nwere ike bụrụ n'okpuru iwu njikwa mbupu US yana enwere ike dabere na iwu mbupu ma ọ bụ mbubata na obodo ndị ọzọ. Ị kwenyere na ị gaghị ebupụ, mbupụ, ma ọ bụ bufee, ozugbo ma ọ bụ na-apụtaghị ìhè, data teknụzụ US ọ bụla enwetara n'aka Ụlọ ọrụ, ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla na-eji data dị otú ahụ, megidere iwu ma ọ bụ ụkpụrụ mbupụ nke United States.
Ọ bụrụ na ị bụ onye California, ị nwere ike ịkọ mkpesa na Ngalaba Enyemaka Mkpesa nke Division of Consumer Product nke Ngalaba Consumer Affairs California site na ịkpọtụrụ ha na ederede na 400 R Street, Sacramento, CA 95814.
Nkwukọrịta Kọmputa. Nzikọrịta dị n'etiti gị na ụlọ ọrụ na-eji ụzọ eletrọnịkị, ma ị na-eji saịtị ma ọ bụ zitere anyị ozi-e, ma ọ bụ ma ụlọ ọrụ biputere ọkwa na saịtị ma ọ bụ na-agwa gị okwu site na email. Maka ebumnuche nkwekọrịta, ị (a) nkwenye ịnata ozi sitere na Ụlọ ọrụ n'ụdị eletrọnịkị; na (b) kwenye na usoro na ọnọdụ niile, nkwekọrịta, ọkwa, mkpughe, na nkwukọrịta ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ na-enye gị na eletrọnịkị mejuo ọrụ iwu ọ bụla nke nkwukọrịta dị otú ahụ ga-eju ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ime ederede siri ike.
Usoro niile. Usoro ndị a bụ nkwekọrịta niile dị n'etiti gị na anyị gbasara iji saịtị ahụ. Ọdịda anyị iji gosipụta ma ọ bụ mmanye ikike ọ bụla ma ọ bụ inye nke Usoro ndị a agaghị arụ ọrụ dị ka ịwepụ ikike ma ọ bụ onyinye a. Aha ngalaba dị na Usoro ndị a bụ naanị maka ịdị mma na enweghị mmetụta iwu ma ọ bụ nkwekọrịta. Okwu a "gụnyere" pụtara "gụnyere enweghị oke". Ọ bụrụ na ejidere usoro ọ bụla nke Usoro ndị a ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma ma ọ bụ enweghị ike ime ya, ndokwa ndị ọzọ nke Usoro ndị a ga-abụ nke na-abaghị uru yana ndokwa na-adịghị mma ma ọ bụ nke na-akwadoghị ka a ga-ewere na ọ gbanwere ka ọ dị irè ma bụrụ nke a kwadoro ruo ókè iwu kwadoro. Mmekọrịta gị na Ụlọ ọrụ bụ nke onye ọrụ nkwekọrịta nọọrọ onwe ya, ọ dịghịkwa otu ọ bụla bụ onye nnọchi anya ma ọ bụ onye mmekọ nke nke ọzọ. Usoro ndị a, yana ikike na ọrụ gị dị n'ime ebe a, enweghị ike ịkenye, nyefee ya, nyefee ya, ma ọ bụ bufee ya na-enweghị nkwenye ederede tupu ụlọ ọrụ, yana ọrụ ọ bụla nwara, nkwekọrịta subcontract, ndị nnọchi anya, ma ọ bụ nyefe megidere nke a ga-abụ ihe efu. efu. Ụlọ ọrụ nwere ike ịnye usoro ndị a n'efu. Usoro na ọnọdụ ndị akwadoro na Usoro ndị a ga-ejikọta ndị ọrụ.
Ozi ahia ahia. Ụghalaahịa niile, akara ngosi na akara ọrụ egosiri na saịtị ahụ bụ ihe onwunwe anyị ma ọ bụ ihe onwunwe nke ndị ọzọ. Achọghị ka ị jiri akara ndị a na-enweghị nkwenye ederede mbụ ma ọ bụ nkwenye nke ndị ọzọ nwere ike ịnwe akara ahụ.
Maka ajụjụ ọ bụla gbasara iwu a, biko kpọtụrụ legal@exospecial.com n'oge ọ bụla.